Kutheni Khetha Us?
Ekhaya Air engumcoci
Small Air engumcoci
Car Air engumcoci
Iinkonzo ze-OEM / i-ODM
Ucoceko lomoya olulungele yonke imimandla
ngomphathi ku 21-08-05
Ukufika kobhubhane kusenze sonke saqonda nzulu ukuba impilo bobona butyebi bukhulu. Ngokwokhuseleko lommandla womoya, ukuxhaphaka kweentsholongwane kunye neentsholongwane, uhlaselo lomoya ovuthuzayo, kunye ne-formaldehyde egqithileyo ezindlwini ezitsha nako kwenza ukuba abahlobo abaninzi banike ingqalelo ...
Sifudukele kwiOfisi eNtsha!
ngomphathi ku 21-07-03
AbaThengi abathandekayo: Siyazingca ukwazisa ukuba ngenxa yokukhula kwethu okuphawulekayo ngowama-2020, iofisi yethu yaseShenzhen yafudukela kwindawo entsha ngo-Epreli. Indawo entsha ikwi-33 / F, kwiZakhiwo ezili-11, eTiananyungu Industrial Park, kwisitalato iBantian, kwiSithili saseLonggang, kwisiXeko saseShenzhen, kwiPhondo laseGuangdong, China. Sijonge ...
Ufuna isicoci somoya kwi-COVID 19
Inkxalabo malunga ne-COVID-19, abantu abaninzi banexhala malunga nomgangatho womoya ongaphakathi kunye nokuba ngaba isicoci somoya singanceda. Iingcali zeNgxelo zabaThengi zityhila into enokucocwa yindawo yokuhlala xa kuhlanjwa umoya. Zintathu iintlobo eziphambili zokucoca umoya eziye zabekwa uphawu ...
Ngaba isicoci somoya singayibulala i-COVID-19?
ngomphathi ku 21-06-01
Ngokusasazeka kwe-COVID-19, kuye kwaba yimvumelwano yokunxiba iimaski xa uphuma. Ke ngoko, kwindawo yangaphakathi apho abantu bahlanganisana kwizakhiwo zeofisi, iindawo ezinkulu zokuthenga, iihotele, iivenkile zokutyela, njl. ...
Ingqungquthela ye-E-yorhwebo enqamleze umda ngo-2021 kunye neFair Sourcing eShenzhen
Ngomhla we-7 kuMeyi-8 ka-2021 iNgqungquthela ye-E-yorhwebo kunye ne-Fair Sourcing yabanjwa kwiHolo 8 yeNgqungquthela yamazwe ngamazwe e-Shenzhen Futian kunye neZiko leMiboniso. Umhlaba wawuphuphuma. Ngomxholo othi "ihlabathi lincinci, ishishini likhulu", likhange ngaphezu kwe-300 + Ali kwi ...
Iingcebiso eziluncedo zokuzikhusela kunye nabanye kwi-COVID-19
ngomphathi ku 21-05-11
1.Nxiba imaski egubungela impumlo nomlomo ukunceda ukuzikhusela nabanye. 2.hlala iinyawo ezi-6 ngokwahlukileyo kwabanye abangahlali nawe. 3.Fumana iyeza lokugonya le-COVID-19 xa likho kuwe. 4.Vimbela izihlwele kunye neendawo zangaphakathi ezingenayo umoya. 5. Hlamba izandla zakho rhoqo ngesepha namanzi. Sebenzisa ha ...
Singasebenzisa iimaski kunye nezinto zokucoca umoya kunye ngexesha lobhubhane
Kutshanje, ngaphandle kwe-China, ubhubhane wesithsaba omtsha uqalile ukubanzima kwakhona, nokuba mandundu ngakumbi kunango-2020. Ke ngoko, kusafuneka ukunxiba imaski ngaphandle, kwaye kufuneka kuvulwe isicoci somoya ekhaya. Nangona izixhobo zokucoca umoya zingenakucoca kakuhle ...
Kufuneka senze ntoni ngokuchasene ne-COVID 19
ngomphathi ku 21-04-23
Sonke siyazi ukuba abantu kwihlabathi liphela bazakufumana isitofu sokugonya i-COVID 19. Ngaba oko kuthetha ukuba sikhuselekile ngokwaneleyo kwixa elizayo? Ngokwenyani, akukho mntu unokuqinisekisa ukuba xa sinokusebenza kwaye siphume sikhululekile. Sisenokubona kukho ixesha elinzima phambi kwethu kwaye kufuneka siqaphele ukukhusela ...
Ngaba isicoci somoya sinokucoca i-Covid-19?
ngomphathi ku 21-04-16
Emva kokuba umsi ushiye umbono wabantu, uninzi lwabantu lwalubambe isimo sokuthandabuza malunga nezinto zokucoca umoya, baziva ngathi akukho mfuneko yokuthenga izinto zokucoca umoya. Abakhange bazive bekhathazekile xa bephefumla ngaphandle yonke imihla, kodwa ukufika kweCovid-19 kwenza abantu bacinge kwakhona, Kukho idem ...
Wamkelekile ukuba undwendwele i-2021 yokufika kwabaCoci beMoya ngokuBonisa ngokuBukhoma
Wamkelekile ukuba utyelele iNgcaciso yoMbonisi oPhezulu woMgangatho oCocileyo woMoya
I-Shenzhen Guanglei Electronic Co, Ltd. yenza umboniso ophilayo kwi-Made-in-China.com. Sijoyine ngoku! Isihloko: Ingcebiso yokuCoca isiCoci soMoya soMgangatho oPhakamileyo: 2021-03-03 16:00 PM UTC + 08: 00 Cofa le URL elandelayo ukungena kwigumbi lokubonisa ngqo: https://live.made-in-china.com/ igumbi-dmJnEcxWWQ ...
Wamkelekile ukuba utyelele isiCoci soMoya eshushu esicocekileyo kunye neOzone Generator Live Show
I-Shenzhen Guanglei Electronic Co, Ltd. yenza umboniso ophilayo kwi-Made-in-China.com. Sijoyine ngoku! Isihloko: 2021 Ukuthengisa okucoca umoya oshushu kunye neOzone Generator Ixesha lokuqalisa: 2021-03-02 20:00 PM UTC + 08: 00 Cofa le URL elandelayo ukungena kwigumbi lokubonisa ngqo: https: //live.made-in-china. com / igumbi-leNxEQ ...
123456Okulandelayo> >> Iphepha 1/6
I-Shenzhen Guanglei Electronic Co, Ltd
(iOfisi) 33 / F, Ukwakha i-11, iTiananyungu Industrial Park, isitalato iBantian, iSithili saseLonggang, isiXeko saseShenzhen, iProcess yaseGuangdong, China.
(Factory) 1st Building, No.15 Dalingbian Road, Shahu Tangxia, Dongguan City, kwiPhondo Guangdong, China.
IsiCoci-Air Ekhaya Air engumcoci, Ekhaya Air engumcoci, Ngokuzenzekelayo Neutralizes Ekhaya Air ocwenga , UV Ekhaya Air ocwenga , Ozone Air ocwenga Ekhaya Depot , Best Ekhaya Air ocwenga UK , Zonke Products